Thiago Alcântara oo ka hadlay wararka ku aadan in Zidane uu noqon doono badalka Niko Kovač ee kooxda Bayern Munich – Gool FM
(Bayern) 10 Okt 2018. Thiago Alcântara ayaa ka warbixiyay wararka lala xiriirinayo in macalinka reer France ee Zinedine Zidane uu noqon doono badalka tababare Niko Kovač ee kooxda Bayern Munich.
Niko Kovač ayaa xaalad adag kaga jira kooxda Bayern Munich sababa la xiriira natiijo xumi ku timid kooxda reer Germany, xili ay kaga jiraan dhanka kala sareynta horyaalka Bundesliga booska kaalinta 6-aad, kadib 7 kula ee laga soo ciyaaray.
Macalinkii hore kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ee kula soo guuleestay saddex jeer xiriir ah ee tartanka Champions League ayaa lala xiriirinayaa inuu la wareegi doono shaqadan, waxaana arintan ka hadlay Thiago Alcântara
“Kaliya waa warar been abuur ah, wararka xanta ah, xili kasta waa been abuur oo kaliya”.
“Nasiib wanaag, waxaa jira ciyaartoy badan waaweyn ee ka tirsan kooxda Bayern Munich, waana ognahay sidii aan wax uga qaban lahayn arintan”.
“Waxaan isku dayeynaa inaan ka shaqeyno sidii aan wax kaga bedeli lahayn xaaladdan oo aan hore ugu sii socon lahayn”.